ပန်ဒိုရာ: ကမ္ဘာကြီးပျက်တဲ့ ကိစ္စ
ခပ်တည်တည်နဲ့ လူကို တက်ဂ်ချင်တာလား။ ခပ်တည်တည်ကြီး ရေးကြည့်ဦးမယ်။ ရှာကြံဖြေသိမ့်ချင်တဲ့ အချက်ကို သဘောတူပါ၏။
အားလုံး သေရမယ်ဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာကြီး ပျက်ရင်လည်း ပျက်ပေါ့ သိပ်တွေးမကြောက်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပန်ဒိုရာရဲ့ ကမ္ဘာကြီး ပျက်ရင် တယောက်တည်း အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့ရမှာကို ကြောက်တယ်ဆိုတာ တခုကြောင့် အတွေးရပြီး ကိုယ်ဆိုရင်လည်း ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူးလို့ တွေးပြီး ကြောက်နေမိတယ်။
ဟားဟားဟား တကယ်ဘာမှမဖြစ်သေးတော့ ပြောင်စေ ပျက်စေပေါ့ တကယ်ဖြစ်ကြည့် ဖင်ပူးထောင်ပြီး အော်နေမှာကျိမ်းသေတယ်
အတွေးလေးတွေက မိုက်လိုက်တာ မရယ်။
ပန်ပန် မြန်မာဆိုတာ ဒီလိုမှပေါ့ကွ..
ကမ္ဘာကြီး ပျက်ခါမှ ပျက်ရော...
မနက် စောစောစီးစီး စိတ်ကြည်လင်စရာလေးတွေ ဖတ်ရလို့ ပါးစပ်မစေ့နိုင်အောင် ရယ်နေရတယ်...
အဲ.. အဲ... Tag ထားတယ် ဆိုတဲ့နေရာရောက်မှ ပါးစပ်ပိတ်သွားလေတော့တယ်... :-0
ကိုယ်လို ငကြောက်ကို ကမ္ဘာကြီးနဲ့ ချီတဲ့ ကြီးကြီးမားမားကိစ္စတွေ လာ Tag တာပဲ... ကိုယ်ဘယ်လောက်ကြောက်လဲ ဆိုတာ ရေးရပေအုံးတော့မပေါ့... ဟဲဟဲ..
Great start for Monday morning...
ကျေးဇူး အထူး ဥပကာရ
မပန်ရဲ့ အစီအမံလေးကို သဘောကျတယ်....
ညီမကတော့ ဝါဆိုဖယောင်းတိုင်တွေ မီးခြစ်တွေ စုထားမယ်...
ကမ္ဘာပျက်ရင် ဒုက္ခ အဟီးး ဘလော့မဂင်းရတော့ဘူး မပွားရတော့ဘူး ဟုတ်တယ် ဒါလဲ ကြောက်စရာပဲး)
ပန်ဒိုရာကျောက်စာကိုတော့ဖတ်ချင်သား။ ဘာ ဘာသာနဲ့ရေးမှာလဲဟင်?
နောက်ထပ် လှလှပပဂျောက်ကျနေရဦးမယ့် နေရာ
ကျိန်းသေတာကတော့ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေအနားမှာ မနေချင်ဘူး...။
သူက တော်တော် ပေါသွားပြီးပြီ
ကိုယ်က ဘယ်လို ထပ်ပေါရပါ့
ခုတော့ မနက်ခင်း စောစောစီးစီးမို့ခပ်တည်တည် နေလိုက်ဦးမယ်
အချိန် - မနက် ၁၁း၀၀၊ အောက်တိုဘာ ၂၆၊ မန်းဒေး၊ (ကမ္ဘာပျက်ရန် ၃ နှစ်အလို)
မနော် ပြောသလို လုပ်တာ ကောင်းမယ်ထင်တယ်... ၀ိုင်သောက်ပြီး နောက်ဆုံး ကဗျာ တပုဒ် စုရေးကြတာပေါ့...
နောက်တစ်ကမ္ဘာမှာ မြန်မာစာ အင်္ဂလိပ်စာ မရှိရင် ပန်ဒိုရာကျောက်စာကြီးတော့ တွားပီ..:P
ကမ္ဘာကြီး ပျက်တဲ့ အခါ ဘာတွေ လုပ်မိမလဲ တော့ ခုထိတွေးလို့ မရသေးဘူး အစ်မပန်ရေ .... တည်နေတဲ့ အချိန်မှာတောင် မနက်ဖြန်အတွက် အချိန်ဇယားက မသေချာသေးလို့ ဖြစ်မယ်ဗျ ...... အစ်မရဲ့ အတွေး လေး ဆန္ဒလေးတွေ ကို ဖတ်သွားပါတယ်
It was said in.....Revelation Chapter 16, verse 18
Then there came flashes of lightning, rumblings, peals of thunders andasevere earthquake. No earthquake like it has ever occurred since man has been on earth, so tremendous was the quake.
Also on Revelation Chapter 16, verse 20..it said..
Please search God.
ပန်ဒိုရာကျောက်စာ သင်ချင်ပါတယ်ဗျို့ :D
တယ် မိုက်ပါလား ပန်ရေ… အဲဒီလို အတွေးလေးတွေ ဘယ်လိုများတွေးလိုက်ပါလိမ့်… အားကျသာ…
ပြောဖို့ မေ့သွားလို့ .. ကာတွန်းလေးကို အကြိုက်ဆုံးပဲ…
ကမ္ဘာပျက်မယ့်အကြောင်းတော့ မရေးဝံ့ပေါင်ဗျာ။ အလိုလိုကမှပျက်ပျက်နေလို့ လန့်လန့်နေရတဲ့အထဲ။ အထိတ်တလန့်ရေးရာကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်တော့
မယ်ပန် တို့ လိုလူတွေကိုရောင်းဖို့..
ခုကထဲက ဘက်ထရီတွေ လှောင်ထားအုန်းမှပဲ...
ဖတ်ပြီးနေတာကြာပြီဗျ ခုမှ မန့်ဖြစ်တယ်..
တော်ကြာ မမန့်လိုက်ရပဲ ကမ္ဘာကြီးပျက်သွားမှဖြင့်နော်..း)
ကမ္ဘာကြီးပျက်မယ့်အရေး မပန် မြင်တဲ့ဘက်က လာရပ်ကြည့်လိုက်တော့ ပြုံးပြီးရင်း ပြုံးရင်း ပေါ့ပါးသွားသလိုပဲ..း)
“ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့မှာကို…” ဆိုတာကတော့ တွေးစရာပဲ.. ကျနော်လည်း အဲ့ဒါကိုတော့ ကြောက်မိသား..။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီ တဂ်ပိုစ့်လေးက အားလုံး တွေးသင့်၊ ရေးသင့်ပါတယ်.. အကြောက်တရား မဟုတ်တဲ့ အသိတရား တစ်ခုခု ရနိုင်တယ်ဆိုရင်ကို အမြတ်ပဲလေ.. မဖြစ်နိုင်ရင်လည်း မဖြစ်နိုင်ကြောင်း အသေအချာ ရေးမယ့်သူ ရှိရင်တော့ ကောင်းသားနော်..။
ရေးနေကြတာတွေက ဥသျှစ်သီး ကြွေကျလို့ ထပြေးကြတာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ.. ပွဲမဝင်ခင် ကြိုတင် လေ့ကျင့်တာလို့ ပြောရင်လည်း ကမ္ဘာပျက်မှာ ယုံသလိုကြီး ဖြစ်နေဦးမယ်.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အပြေးလေ့ကျင့်ထားတော့ သက်လုံကောင်းတာပေါ့နော့်..း))
ဟီဟိ ... တမင် ရေးပြီးမှ လာဖတ်တာ။ တော်ကြာ ခိုးချမိမှာစိုးလို့၊ ဒါတောင် တချို့အချက်တွေ တူနေသေးတာနော်။ ခုလည်း ကိုဇာနည့်ဆီက ခိုးချမိသေးတယ် သိလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တချိန်မှာ ပန်ဒိုရာကျောက်စာဆိုပြီး သင်ကြရင်တော့ မဆိုးဘူးဘဲ။ အဲ့ကျောက်စာထဲမှာ အစ်မ နာမည်ပါ ထည့်ရိုက်ပေးနော်။
သြော်..ကမ္ဘာပျက် သီအိုရီ ကြီးကို ကူဖွ ကြသော သူများပေပဲ..ဘယ်သူတွေ များလဲလို့.. ဘလော့ကမ္ဘာတော့..တော်တော်ပျက်သွားတယ်။း)